St Lucia က ရေကူးကန်ထဲမှာ ဘောလုံးသမား Defoe ၏ cousin ဓါတ်လိုက်သေဆုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » St Lucia က ရေကူးကန်ထဲမှာ ဘောလုံးသမား Defoe ၏ cousin ဓါတ်လိုက်သေဆုံး
St Lucia က ရေကူးကန်ထဲမှာ ဘောလုံးသမား Defoe ၏ cousin ဓါတ်လိုက်သေဆုံး
Posted by ကထူးဆန္း on Jul 27, 2012 in Copy/Paste, Travel |4comments
Footballer’s cousin electrocuted in St Lucia hotel pool
The cousin of the England footballer Jermain Defoe has been killed inatragic accident while on holiday in St Lucia.
According to reports, Hannah Defoe, 20, was electrocuted as she dived intoaswimming pool at Juliette’s Lodge,ahotel in Vieux Fort close to the island’s airport.
Hannah’s mother Janet was reportedly taken to hospital after getting an electric shock as she tried to save her daughter.
An investigation is taking place to find out how the tragedy happened.
A statement from the St Lucia Tourist Office said: “We offer our sincere condolences to the family and friends of Hannah Defoe. We have been touch with the family to offer our support.”
The Tottenham Hotspur striker was on the club’s pre-season tour of America when he was told the news.
A statement on Tottenham’s website said: “Jermain Defoe is to return home from our pre-season tour of the US after receiving the tragic news of the death of his cousin Hannah Defoe while on holiday in St Lucia.
Last month, Defoe was forced to fly home from England’s Euro 2012 camp in Poland following the death of his 49-year-old father Jimmy from throat cancer.
His half-brother Jade, 26, died after falling intoacoma followingastreet attack in east London in 2009.
ပုဂံက ဦးတေဇ ဟိုတယ် ရေချိုးခန်းမှာ ရေချိုးစဉ် ဓါတ်လိုက်ပြီး နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက် အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ ရသလို အခု လည်း Caribbean Sea ထဲက St Lucia ဟိုတယ်က ရေကူးကန် မှာ ဓါတ်လိုက်ပြီး သေဆုံးခဲ့တယ် ဆိုတော့ ဘာဘဲပြော ပြော အသက်ဉာဏ်စောင့် ၊ ရေပူဖွင့် ပြီး ရင် ဓါတ်လိုက်နေမလား ဆိုရယ်နဲ့ စမ်းကြည့် ၊ ရေကူးကန် ထဲ ဘယ်သူမှ ရေကူးနေတာ မရှိရင် ဒိုင်ဗင် ထိုးမချလိုက်ဘဲ လက်ကလေး နဲ့ အရင်စမ်းကြည့် ရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီတစ်ခါ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ မဟုတ်ပေမဲ့ သတိထားစရာ သတင်းလေးတွေ့မိလို့ ထပ်ဆင့် မျှဝေလိုက်ပါသည် ။
ငယ်ငယ်လေးပဲ ရှိသေးတယ် ကြံဖန်ပြီး သေရတယ်လို့ ။ အတိတ်ကံပါလာတယ် ထင်ရဲ့။
ကြည့်ရတာ အာမခံတွေ ဘာတွေ တော့ နင့်နေအောင် လျော်ရမယ် ထင်တယ်။
ဒါနဲ့ ကိုထူးဆန်းရယ ်ရေတော့ ကူးလေ့မရှိဘူး ဟိုတယ်တွေမှာ။ ရေပူကတော့ ဖွင့်ချိုးဖြစ်တာပေါ့။ အဲ့ဒါလည်း ဓာတ်လိုက်တာပဲလား ။ ဓာတ်လိုက်နေပါတယ်ဆို ဖွင့်ပြီး ဘယ်နှယ့်စမ်းရပါ့ ။ ဒုက္ခ ..
ရေတွေကို ဖွင့်တဲ့ အခါ အများကြီး တစ်ခါထဲ မဖွင့်ဘဲ နဲနဲဘဲဖွင့် ပြီး လက် နဲ့ အရင်ခံကြည့်ပေါ့ ။ အားပါးတရ ဖွင့်ပြီး အားပါးတရ ချက်ခြင်းဝင်ချိုး တာမျိုး မလုပ်နဲ့ပေါ့ ။ နောက် ရာဘာ ဖိနပ် စီးပြီး စမ်းရင် သက်သာတယ် ။ ဖြစ်ချင်ရင်တော့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး ။
တကယ်တော့ ဟိုတယ် မှတင် မဟုတ်ပါဘူး ။ အိမ်မှာလည်း သတိထားသင့်ပါတယ် ။ လျှပ်စစ် သုံးတဲ့ water heater ဆို သတိထားတာ မမှားပါဘူး ။ ဖြစ်ခဲပေမဲ့ ဖြစ်တတ် တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ.
တော်ပါသေးတယ် ..ကိုထူးဆန်းရေ … ကျုပ်ကတော့ ရေကူးစရာဆိုလို့ ပင်လယ်ရေ
မှာပဲ ကူးဖြစ်တာ …
မြို့ကြီးပြကြီးမှာ နေသူများအဖို့တော့ တက် စ် တာ လေး တခု အမြဲ ဆောာင်ထားကြဖို့
ဒီလိုမျိုး အသက်သေနိုင်ပါလား ဆိုတာကိုတော့